Email marketing sy marketing automation vokatra, vahaolana, fitaovana, serivisy, paikady ary fomba fanao tsara indrindra ho an'ny orinasa avy amin'ny mpanoratra Martech Zone.
Misy fotoana tena mila maka adiresy mailaka fotsiny ianao mba hifandraisana amin'ny mpiara-miasa iray izay tsy anananao ao amin'ny bokinao. Gaga foana aho, ohatra, hoe firy ny olona manana kaonty LinkedIn misoratra anarana amin'ny adiresy mailaka manokana. Mifandray izahay, ka mijery azy ireo aho, mametraka mailaka ho azy ireo… ary tsy mahazo valiny avy eo. Handeha amin'ny fifandraisana mivantana rehetra amin'ny tranonkala media sosialy sy ny valiny aho